YouTube na - akpaghị aka dezie ihe ruru vidio 1.000 | Gam akporosis
Mgbe Google wepụrụ ọrụ ntinye ya tarụ ọrụ na akpaghị aka maka YouTube na 2009, na-arụpụta bụghị ihe niile na-atụ anya. Mana kemgbe ahụ, teknụzụ amatala teknụzụ emeela nnukwu mmụba, agbanyeghị na a ka nwere ụfọdụ chinchi dị mkpa ka emeziwanye.
Ọ bụ n'ime awa ndị a gara aga ka ndị ọrụ YouTube kwupụtara na ọrụ ahụ degharịrị vidiyo vidiyo 1.000 na ndị ọrụ ga-elele vidiyo na ndepụta okwu. ihe dị ka nde 15 ugboro n'ụbọchị.
Google ekwupụtala na ọrụ nke nta nke nta na-eru nso njehie udu nke ederede mmadu na na otutu mmelite di iche iche nke ulo oru a mere kemgbe otutu oge, nyere ya ohere iru onu ogugu 50 na nkenke mgbe o biara ighota okwu ma gbanwee ya na ederede.
Ihe dị iche iche dị na YouTube na-eme n'ụzọ ezi uche dị na ya O siri ike ịdebanye aha ihe niile, ma ọ na-enyekwa ụlọ ọrụ ọtụtụ data iji zụọ teknụzụ njirimara ụda ya.
Mgbe obodo YouTube nyochaa ma dezie nkọwapụta akpaghị aka ndị ahụ, a na-agaghachi na ozi ahụ na igwe mmụta usoro nke mere na usoro ahụ bụ ihe ziri ezi.
Nkọwa akpaka ọrụ ahụ na-enye ugbu a nkwado maka asụsụ 10. Liat Kaver, onye nduzi mmemme YouTube, ekwuola na ụlọ ọrụ ahụ na-ezube iwepụ ọtụtụ oganihu ọ rụpụtara na nso nso a n'asụsụ ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ịnye ọtụtụ vidiyo gafere na teknụzụ YouTube iji nye ndepụta okwu na vidiyo na asụsụ ọzọ.
A YouTube na otu izu gara aga, emelitere ya na gam akporo iji kwe ka nlọghachi y tupu oge playback on a video nnọọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » YouTube na-ekwuwapụta na ọ debanyere vidio 1.000 ijeri na akpaghị aka
Skype na-etinye mmeghachi omume na oku na ozi, ogwe ọchụchọ ọhụrụ na ndị ọzọ